ODUU DURII KEENYA
Uploaded by Solomon Genene
MPC controller design for Inverted pendulum.pdf
Abstract of BSc Thesis
US Army: privacy complaint
Hwy Pre Int Unittests 12a
Superficie de Gelo Ancorada No Riso, Uma - Hilda Hilst
BEEKAN GULUMMAA IRRANAA 1. Abbaa manaa gowwaafi hadadha manaa gowwaa tokkotu jiru turan. Gaafa tokko lukkuu qalatanii hojjetanii erga xumuranii booda yommuu nyaatan waan ittiin ilkaan isaanii keessa baafatan migira guurracha barbaacha gara lafa baddaa deeman. Kana booda gara baddaa yommuu deeman, nama tokkotti gaara keessatti itti dhufanii akkas jedhaniin. Elaa namichuu! Manni kenya kunoo kan gaara jala sanaa lukkuu waxanneeti osoo hin nyaatiin waan ittiin ilkaan keessaa baafannu fudhachuu deemna waan ta’eef gara mana keenyaa sana deemtee nujalaa hin nyaatiin jedhanii namichatti himan. Namtichis isaaniin tole jedheenii erga bira darbee booda, gara mana jaraa deemee kan isaan qopheeffatan sana jalaa nyaatee qodaa keessaa nyaate banaa ishee gatee bahee deeme. Jarreen gowwaanis gaafa baddadhaa gadi migira isaanii guuranii galani, nyaata isaanii nyaachuuf haati manaan gadi fuudhuuf yommuu jettu, ittoonis biddeenis hin jiru. Garuu tisiisni qodaa isaanii keessaa nihuursa ture. Haati manaa gowwaa sanaa, namichuu ni argaa mitii “kun titiisa kanatu nyaata keenya nu jalaa fixee” kanaafuu kaanee haa fixnu yookaan haa haxoofnu” jetteen. Innis ka’ee ilmoo mooyyee fudhatee reebuu yommuu eegalu tisiisonni kaan gaaniirra, kaan immoo mi’oota manarra qubataniitu jiru. Namtichi gowwaanis ka’ee titiisota yeroo rukutuuf jedhu, meeshaalee manaa waliin reebee, meeshaalee manaa caccabsee gaafa fixu, dhumairrattis titiisni tokko haadha warraa namichaa adda ishee irra qubatee jennaan isheenis argitee sagalee osoo hin dhageessisin mallattodhaan namichatti tisisa adda ishee irraa yommuu itti agarsiistu namtichis suuta jedhee qaxxisee tisiisa adda haadha warraa isaarra qubatte sana yommuu rukuttu, haadha warraa isaa waliin adda ishee yommuu rukutu akkasittiin haadha warraa isaa dhahee ajjeesee jedhama.
Harreen waraabessaan waliin firummaa akka hin qabne otoo beektuu mucaan waraabuu du'uu dhageenyaan ilmoon akkuma ofiitii. buqqeefi kan kana fakkaatan oomisha ture. Lafasaa kana irra fuduraafi muduraa adda addaa kan akka Maangoo. Gaaf tokko hattoonni sadii oomisha namticha kanaa hatuuf ooyruusaa seenan. Gidduutti utuu isaan fuudhee deemaa jiruu. Paappayyaa. Namtichis yeroo kana argu. inni lammaffaa Buqqee. “Maaliif boossa?” jedhee isa gaafate. Qotee bulaa tokkotu lafa bal’aa qaba ture. “Amma hundumti keessan isa baattanii jirtan kana liqimsaa” jedhee isaan ajaje. Kana booda isaan qabatee gara waajjira Poolisiitti qajeele.2. “Annillee akkan ta’ettis ta’u nan liqimsa isaan Buqqeefi Paappayyaa baatan kanaafan boo’e” 3. Ijoolleen harree tarkaanfii haadha isaaniitti aaran kun karaatti akkam gochuun isaan irra akka jiru yaadaa dhaqan. Yeroo kana inni Maangoo baatee jiru boo’uu jalqabe. Hattoonni sadanuu afaan tokkoon “Atumti nutti murteessi” jedhaniin. inni sadaffaa immoo Maangoo hatan. Utuu isaan fudhatanii ooyruu keessaa ba’aa jiranuu abbaan ooyirichaa isaanitti dhufe. “Ani isinitti murteessuu wayyamoo hidhamuu isinii wayya?” Jedhee isaan gaafate. Akkuma kara seenaniinis hoomaa waraabessaa du'a gahii taa'u yeroo argan gurra isaanii qaruun dhaabanii haadha isaanii hordofuun mana naanna'anii booyuutti ka'an. Akka waraabessi garaa isaanii hin lafne beekkatanii tooftaa ittiin waraabessicha harkaas bayan haadha isaaniis gammachiisan soqaa achi gayan. Inni tokko Paappayyaa. Innis. Hattichis. Gama sanaa yuustuu 2 . du'a gayii geenyu malee jechuudhaan ijoollee ishii dhiphisuun otoo itti himanuu dirqisiiftee gara du'a gayiitti naxalaa kuula ol-dachaasatanii qajeelan.
ilmoodhuma hundaatu du'aa. yeroo ishiin baatee qajeeltu.. haati Harree garuu waa otoo hin kenniin akkamittan deema jettee deebitee teessee yaaduutti kaate. jedhanii dallaa naanna'anii yeroo isaan kutan. Haa ta'u iyyuu malee teessee iti yaaddee eegeedhamoo hidhii kenuu akka wayyu yoo mari'achuuf ofcinaa laaltu ijoolleen ishii hin jiran.Tolli akkasitti ishiidhaaf deebi'e.Waroonis. sabbtumaa hin qabdu. waan kofaltu fakkaatti. haadhoo harree mee as garagali jedhaniin. Waraabessis kana gammadee. Hidhiin kennee deema'' jettee.. hidhii harree gamaddalatee.Gamana fakkaata sagaleen keessanii Diiminuma nyaattuu Adiidhuma kana udaan keessanii Isinuu hin hamatuu Maaltu nyaate mucaa keessanii?. Warrakoo jabaadhaa abbaan mucaa as-bayii hidhii kiyya gara olii suuta jedhii kutadhu" ittiin jette. kan ilmoo keenyaa maaf kolfa ta'ee? jechuun itti dirrisee garaa ishii jigse.Yeroo kana ilkaan ishii irra keessaa qullaadha. 3 . Sabbatatti waa gudunffattee hin dhufne.
More From Solomon Genene